ကောင်းကင်ကြိုးမော်ကွန်း - ထို rayhab
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကား Olympos မှတ်တမ်းတင်ဖို့အပြေးနေသည်
Antalya ရဲ့ Kemer ခရိုင်နှင့်စံချိန်မှ running အခြားရွေးချယ်စရာ Olympos ကေဘယ်လ်ကားများ၏ဒေသရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများတဦးမှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 2007 Olympos ကေဘယ်လ်ကားဝန်ဆောင်မှုအတွက်ယခုနှစ် All-အချိန်စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ သာယာသော 12 ၏အနီးစပ်ဆုံးမိနစ် [ပို ... ]
မနက်စောစော Al-Adha ခံရသောပွဲအပေါ်ကိုပိုမိုအချိန်ဖြုန်းဖို့နိုင်ငံသားတွေသေချာစေရန်, cable ကိုကားတစ်စီးကုန်းပြင်မြင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး Denizli Bağbaşıအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။ Denizli မြူနီစီပယ်၏လုပျငနျးအကြားကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအတွက်မြို့ပြသစ်တောBağbaşıကုန်းပြင်မြင့်, အနစ်နာခံနှင့်အတူဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
သန်းပြည်သူ့တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နှစ်တာ 1 Babadag cableway ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်
Muğlaရဲ့ Fethiye ခရိုင်က Sky အားကစားနှင့်အပန်းဖြေစင်တာ, ခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပေါင်မုန့်တံခါးဝ၌ Babadag ။ ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းက Paragliding အရေအတွက်ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 18 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ပြသဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Fethiye ရဲ့ 'ကမ်ဘာပျေါတှငျပြတင်းပေါက်' 'ကိုမွငျအဖြစ် [ပို ... ]
တစ်ဦး bird's-မျက်စိ Kecioren ကေဘယ်လ်ကားပျော်မွေ့ချင်သူများသည်နွေရာသီအတွက်အပြေးနေသည်။ Kecioren မြို့တော်ဝန် Turgut Altınokသူက "ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေ, မိုဃ်းကောင်းကင် cable ကိုကားတစ်စီး Kecioren အလှတရားကိုကျေးဇူးတင်စောင့်ကြည့်၏အပျော်အပါးကြုံနေရကျနော်တို့ကိုလည်းkeçiörenခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ Cable ကိုကားလှုပ်ရှားပုံများ, ထိုခရိုင်အပြင်ဘက်မှကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမြင်နေကြသည်" [ပို ... ]
အဆိုပါ2နေ့စောင့်ရှောက်လိုင်းကေဘယ်လ်ကား yenimahalle Şentepeအတွက်
Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်းနှင့်xnumx'ünc3ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်နေချိန်မှာဘူတာအကြား, မနေ့ကကြောင့်နှစ်ရက်ကြာအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုန်ဆောင်မှုများလုံးဝပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဤအနှစ်ရက်ထဲမှာ, ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ၏တရားဝင် website တွင်အသိပေးစာပို့စ်တင်နေဖြင့်အတ္တ [ပို ... ]
cable ကိုကားတစ်စီးမှကောင်းသောသတင်း Alanyaspor
နေ့တိုင်းတထောင်ကလူ, "ခရီးသည် Alanyaspor နှုန်း 12 ပေါင်ဖို့" မြို့တော်ဝန် Murat Yucel ၏ဂတိနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်အချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော 1 တင်ဆောင်လာသော cable ကိုကားတစ်စီးကဝတ်: အယ်လ်ဆာဘား Mehmet သတင်းအဆိုအရ "ဟူသောဂတိတော်ထားရှိမည်ပါလိမ့်မည်အား";2နှစ်ပေါင်း "Antalya ရဲ့ Alanya ခရိုင် [ပို ... ]
Alanya စျေး Tariff ဥပဒေမဲ့ Ropeway
ဖေဖော်ဝါရီလတစ်စျေးမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို Alanya မြူနီစီပယ်ကောင်စီပေါ်ပေါက်ရေးကဆုံးဖြတ် cable ကိုကားတစ်စီးမတန်တဆစျေးနှုန်းကတည်းကကေဘယ်လ်ကား 14,4-21,6 နှုန်းစျေးနှုန်းမပြောင်းခဲ့ဘူးဟောင်းစာချုပ်အကြားတစ်ဦးပုံဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့နေများတွန်းလှည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်, "လိုအပ်လာရင်ကျနော်တို့တရားစွဲပါလိမ့်မယ်" [ပို ... ]
Alanya အတွက်စျေးကောင်စီ cableway ဆုံးဖြတ်သည်
ဖေဖော်ဝါရီကောင်စီ၏ Yucel နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုချွတ်ကမ်းလှမ်းအဆိုပြု 2019 နှစ်ပေါင်းအတူပါလီမန်အာဒိုဂန်Toktaş Alanya မြူနီစီပယ်၏ဟောင်းများ CHP အဖွဲ့ဝင် Ceren Sahin သတင်းအဆိုအရ cable ကိုကားစျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခွင့်အာဏာ yenialanya ထံမှ Alanya မြူနီစီပယ်Encümeniတိုက်ရိုက်ပေးထားကလည်း, [ပို ... ]
ဤအချိန်တွင်အခွန် '' 10 £မှAlanyalı'dan '' Alanya ကေဘယ်လ်ကားသမ္မတနှင့် Alanya အတွက်ဇာတိမြို့အသင်းအဖွဲ့များအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲငင်။ တစ်ဦး snowball, Alanya NEW Alanya မြူနီစီပယ်နေဆဲသတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အပေါ်တိတ်ဆိတ်ထိန်းသိမ်းထားတူသောလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကဏ္ဍအားလုံးတွင်ထံမှတုံ့ပြန်မှုကြီးထွားလာနေချိန်မှာ [ပို ... ]
Denizli ကေဘယ်လ်ကားကြိုပို့နာရီ Changed
Denizli ကေဘယ်လ်ကား, နွေရာသီရာသီဖွင့်လှစ်။ Denizli မြူနီစီပယ်ရဲ့ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုBağbaşıကုန်းပြင်မြင့်နှင့်အတူမြို့ပြသစ်တောအကြားဖွင့်လှစ်ခဲ့သောကြောင့်ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့်အတူအချိန်နာရီပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်။ cable ကိုကားနင်္လာမှသောကြာနှင့်တနင်္ဂနွေနာရီပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
Yenimahalle Şentepeလိုင်းကို Maintenance စစ်ဆင်ရေး Ropeway
Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်း၏ 3, မြို့ပြနိုင်ငံသားများမှအခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး။ နှင့်4။ အကြောင်းတစ်လတာဝန်ထမ်းဆောင်မရနိုင်ကြောင်းစီစဉ်ထားမိုးသည်းထန်စွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ကြောင့်ဘူတာအကြား။ အတ္တရထားစနစ်များဦးစီးဌာန, cable ကိုကားတစ်စီး၏တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Alanya နှင်းလျှောစီးဖို့တုန့်ပြန်အခကြေးငွေများ Snowball လက်မှတ်တွေချီ
အသစ်က cable ကိုကားဖြင့်ကြီးပြင်း Alanya မတန်တဆစျေးနှုန်းများတုံ့ပြန်ကြာပါသည်။ အဆိုပါ Alanya မြူနီစီပယ်အတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်ကေဘယ်လ်ကားထိုကဲ့သို့သော Avalanche အဖြစ် cable ကိုကားတစ်စီးစီးမိနစ်တုံ့ပြန်မှုကနေ 9005မီတာ ပတ်သက်. တိတ်ဆိတ်ဖို့အာရုံကိုဆွဲယူလက်မှတ်၏ 28 တန်ဖိုးရှိပြောဆိုထားသည် [ပို ... ]
Yenimahalle Şentepeစောင့်ရှောက် line break နှစ်ဦးကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဘူတာရုံ
အတ္တဒတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်း၏Çankayaမြေအောက်ရထားဘူတာရုံ3နှင့်အတူŞentepeအကြားခရီးသည်သယ်ဆောင်။ နှင့်4။ ကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ကဤအပိုင်းကိုပိတ်ပါလိမ့်မည်ဘူတာအကြားလုပ်ခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ Yenimahalle-လိုင်းကေဘယ်လ်ကား3၏Şentepe။ နှင့် [ပို ... ]
အဆိုပါနေအိမ်သို့ Alanya 10 ပေါင်ဖို့ကေဘယ်လ်ကားသရုပ်ပြ
MHP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Türkdoğanယနေ့ cable ကိုကားတစ်စီး Alanya သွားသဖြင့်နှစ်ဦးစလုံး Alanya ၏လူ cable ကိုကားတစ်စီးစီးဖို့စျေးပေါအပေါ်ပြုအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသောစျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လေ၏။ Alanya မြူနီစီပယ်၏ Alanya နေထိုင်သူများကခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီTürkdoğan, " [ပို ... ]
Alanya အဆိုပါ Tariff နှုတ်ခမ်းUçuklatıyများ၏ကေဘယ်လ်ကားဖြစ်ပါတယ်
Alanya အတွက်တုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းရန်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားဖြင့်လျှောက်ထားအဆိုပါအခွန်နှုန်းထားများ။ တစ်နှစ်အိပ်မက်နောက်ဆုံးတော့ 37 ပေါင်မြင်ဘူးသောကေဘယ်လ်ကြိုးကား Alanya 28 လက်မှတ်စျေးနှုန်း။ စီးပေမယ့်စီးလို့မရဘူး THD နိုင်ငံတော်သမ္မတ Gamal Şencan "ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံသားများနှင့်ခရီးသွားဧည့်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အမဲသတ်သမား [ပို ... ]
တူရကီထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်ဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်မြို့တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေကူး, မြို့တော်ရဲ့အသွားအလာကိုဝန်သိသိသာသာတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်,7/ 24 စင်ကြယ်သော-up, အလုပ်ဖျော်ဖြေကြီးအရေးပါမှု၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေးလျော့နည်းစေသည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
Samsun, 24 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့SAMULAŞကတနင်္လာနေ့ဇွန်လကနေသူ့ရဲ့နွေရာသီလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်စတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေ။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က (SAMULAŞ), နွေရာသီကာလရဲ့ start နှင့်ကျောင်းများ၏ပိတ်သိမ်း [ပို ... ]
Samsun ပို့ဆောင်ရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေ။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc ကို (SAMULAŞ), Samsun Westpark 10.00 တည်ရှိသော cable ကိုကားတစ်စီးစက်ရုံ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်နာရီ - 23.00 ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Samulaşတရားဝင် twitter အကောင့်ဖြင့်ကြေညာချက် "Westpark - ဟေးလ်အကြား Amisos ဝန်ဆောင်မှု [ပို ... ]
Bursa အတွက် Cable ကိုမော်တော်ကားအခမဲ့ Ratings အဖွဲ့ဆောင်ခဲ့
Uludag Bursa Inc ကိုမှ cable ကိုကားတစ်စီးမှချောမွေ့စွာလက်လှမ်းပေး, ကျောင်းသားများအခမဲ့2နေ့ရက်ကာလအဘို့ခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။ 140 500 တထောင် Cabin တစ်ထမ်းစွမ်းရည်,9ကီလိုမီတာနှင့်အတူကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူတစ်နာရီလျှင်ခရီးသည် [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan Inc ကိုလက်အောက်ခံ ORBEL ရွှေ cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းအားဖြင့် operated နှင့်တထောင်တဲ့ operating နာရီစောင့်ရှောက်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည် Boztepe, 500 အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးခဲ့ပါသည်။ ကြည်းတပ် Boztepe, ရွှေနှင့်အတူမြို့လယ်ဗဟိုအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုအဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်း [ပို ... ]
မိုဃ်းလင်းသိမ်းဆည်းခြင်းအချိန် Denizli cable ကိုကားထဲတွင်စတင်
ပူနွေးသောရာသီဥတု Denizli မြူနီစီပယ်, Denizli cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အဘိဓါန် Highland ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲနာရီအတွင်းBağbaşıလငျးသိမ်းဆည်းခြင်းအချိန်စတင်ခဲ့သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနယူးအချိန်စည်းမျဉ်းများ, 10 00 ပိတ်ခြင်း: Weekend 21 00 ဖွင့်လှစ်: 09 ပိတ်ခြင်းကြားရက်များ 00 ဖွင့်လှစ်။ 21: 00 အလားတူ [ပို ... ]
ယာဉ်၏ 30 ထောင်ချီအတွက် Tunektepe Teleferik နေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc ကုမ္ပဏီ ANET ။ ပျော်ပွဲစားဒေသများနှင့်တော့ Pogo တော့ Pogo9နှင့်အတူတစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစက်ရုံ, Sarisu နှင့်Topçam Ladies သဲသောင်ပြင်ပန်းခြံအားဖြင့် operated Tunektepe တစ်ရက်အားလပ်ရက်အပေါ်ဧည့်သည်များနှင့်အတူရေလွှမ်းခံခဲ့ရသည်။ 200 ပတ်သက်. အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအဘို့ဆောင်သောပွဲ [ပို ... ]
အွန်ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဧည့်သည်များ၏ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို်ဆောင်မှုများBalçova'dakiအမျိုးသားနေ့အားလပ်ရက်အတွင်းစံချိန်ချိုးဖဲ့။ တထောင်ကလူသောနေ့ရက်ကာလကိုအခွင့်ကောင်းယူ 8 အကြောင်းကိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည့်စက်ရုံများမှပြည်တွင်းနှင့် 22 ။ ဒါဟာတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်လစဉ်ပျှမ်းမျှထက်ကျော်လွန်။ Izmir [ပို ... ]
Bursa အတွက် cable ကိုကားထဲတွင် Done ကို Maintenance အလုပ်, Uludag တောင်တက်စတင်
သတင်း Herald မည်သူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်သဘာဝတူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများတဦးဖြစ်ကေဘယ်လ်ကားဖြင့် Uludag သုံးပတ်ရဲ့အဆုံးမှာရောက်လေ၏။ 140 500 တထောင် Cabin တစ်ထမ်းစွမ်းရည်,9ကီလိုမီတာနှင့်အတူကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူတစ်နာရီလျှင်ခရီးသည် [ပို ... ]